Somali | Abdishakur Ali
Asc, waad ku mahadsantahay booqashadaada bogeyga!
Magaceygu waa Cabdishakuur. Waxaan ka mid ahay murashixiinta kala duwan ee sanadkan 2017 u tartamaya golaha deegaanka ee magaalada Turku. Waxaan ka sharaxanahay xisbiga Isbaheysiga Midnimada Qaran ee Kokoomus. Kokoomus waa xisbiga ugu weyn isla markaana ugu kuraasta badan magaaladan Turku
iyo magaalooyin kale oo badan oo dalka ku yaala.
Waxaan ka mid ahay shaqsiyaadka sida gaarka ah ee firfircoon ugu dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka Finland gaar ahaan magaalada Turku. Waxaan hadda ka mid ahay mas’uuliyiinta maamulka daladda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Galbeedka Finland halkaas oo aan mas’uuliyado kala duwan kasoo qabtay illaa iyo hadana aan ka hayo. Waxaan sidoo kale talo bixiye ka ahay xafiiska adeega ajaanibta ee magaalada Turku. Waxaan sidoo kale khabiir xagga dhaqamada kala duwan ka ahay mashruuca BAANA oo ah mashruuc ka shaqeeya arrimaha shaqo abuurka, tayeynta iyo dhiirogelinta ganacsiga ee ajaanibta.
Waxbarashadeyda waa heer labaad ee jaamacadda waxaana ku takhasusay maamulka ganacsiga iyo dhaqaalaha. Waxaan sidoo kale ku takhusasay maareynta mashaariicda caalamiga ah. Waxaa iisii dheer xirfado kale oo aad ka dheehan karto gal taariikheedkeyda shaqo iyo waxbarasho.
Arimaha aan doonayo in aan ka shaqeeyo isla markaana aan wax ka qabto waxaa ka mid ah:
arimaha qoyska - tayeynta iyo sahlida adeegyada kala duwan ee qoyska.
shaqo la’aanta - dhiirogelinta ganacsiga si shaqo abuurku u bato isla markaana shaqo la’aanta raagta u yaraato.
ganacsiga - kabida iyo kobcinta ganacsatada yaryar iyo kuwa meel dhexaadka ah – Turku oo noqota magaalada ugu fiican ee ganacsi lagu sameyn karo.
dardar gelinta la qabsiga wadanka – suurtogelinta dhaqso ugu biiridda suuqa shaqada iyo fahamka bulshada – ka faa’ideysiga cilmiga, xooga iyo waayo-aragnimada ajaanibta.
waxbarashada – waxay udub dhexaad u tahay dhaqdhaqaaqa iyo soo jiidashada dhaqaale ee magaaladeena.
arimaha sports-ka guud ahaan gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka oo la hormariyo.
dhalinyarada – hormarinta door ku lahaanshaha dhalinyarada ee arimaha muhiimka ah ee gobolka.